दार्जीलिङमा गोर्खाहरूको लागि शिक्षा, जातीय उन्नति र भाषा उत्थानमा पाद्री गङ्गाप्रसाद प्रधानको महत्वपूर्ण भूमिका छ – डा. एडोन - खबरम्यागजिन
Homeखबरखरसाङदार्जीलिङमा गोर्खाहरूको लागि शिक्षा, जातीय उन्नति र भाषा उत्थानमा पाद्री गङ्गाप्रसाद प्रधानको महत्वपूर्ण भूमिका छ – डा. एडोन
July 28, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खरसाङ 0
खरसाङ, 28 जुलाई
‘दार्जीलिङ पहाडमा पाद्री गङ्गाप्रसाद प्रधानको शिक्षा, जातीय उन्नति र भाषा उत्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका छ। उनले शिक्षाको लागि विभिन्न पाठ्य पुस्तकहरू लेख्नुको साथै अनुवाद पनि गरेका थिए। उनी जाति प्रेमी थिए, जातिलाई नयाँ दिशा दिन चाहान्थे, परिष्कृत र परिमार्जित भाषाको प्रयोग गरी एकरूपता ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। डा पारसमणि प्रधानलाई उभ्याउने पनि गङ्गाप्रसाद नै थिए।’
उक्त कुरा रेभ. डा एडोन रोङ्गोङ्गले तीनधारेमा आयोजित 167 औं पाद्री गङ्गाप्रसाद प्रधानको जन्म जयन्ती समारोहमा मुख्य अतिथिको रूपमा बोल्दै भनेका हुन्।
उनले4जुलाईमा गङ्गाप्रसाद र 13 जुलाईमा भानुभक्तको जन्मदिन परेकोले एक महिनामा नेपाली साहित्यमा दुई विद्वानहरू जन्मेको बताउँदै दुवैजनाको लेखाईमा वातावरण र परिस्थितिको भिन्नता रहेतो बताए।
‘गङ्गाको समयमा यहाँ भाषा नै थिएन, केवल शब्दहरू थिए, यस्तो परिस्थितिमा गङ्गाले विभिन्न बोली भएका नेपालीहरूलाई एकत्रित गरेर भाषाको एकरूपता ल्याउने प्रयास गरे,’ उनले भने, ‘भानु र गङ्गा हाम्रो मोडल होइनन् तर एउटा आदर्श हुन्। उनीहरू हाम्रो भाषाको लागि दर्शन बोकेका विद्वानहरू थिए।’
तीनधारेको सन्त जोहन चर्चको आमा झुण्ड र युवा झुण्डको आयोजनामा सम्पन्न 167 औं पाद्री गङ्गाप्रसाद प्रधान जन्म जयन्ती समारोहमा समारोह अध्यक्षको रूपमा तीनधारेको दिपक प्रधान, प्रमुख अतिथिको रूपमा वरिष्ठ साहित्यकार डा. एडोन रोङ्गोङ्ग उपस्थित थिए।
प्रेजिना तामाङले सञ्चालन गरेको समारोहमा शुरूको प्रार्थना एल्डर मसिह प्रकाश मोक्तानले गरे भने स्वागत सम्भाषण पूर्व प्रधान अध्यापिका मार्थारानी राईले राखिन्।
पाद्री गङ्गाप्रसाद प्रधानले लेखेको ‘प्रभु अर्जी सुनिदेऊ गोर्खालीले मुक्ति पाउने ढोका खोलिदेऊ’ नामक गीत सामूहिक रूपमा प्रस्तुत गरियो। कार्यक्रममा पाद्री गङ्गाप्रसाद प्रधानको जीवनी विषयमा एल्डर मसिह प्रकाश मोक्तानले छोटकरीमा बताए।
कार्यक्रममा सरिता मोक्तान, ललिता मोक्तान, प्रेजिना मोक्तान र पुन्नु लेप्चाले सामूहिक गीत प्रस्तुत गरे भने कवि हनोक थापा, मसिह प्रकाश मोक्तान,सुवास राई, पुन्नु लेप्चाले कविता पठन गरेका थिए।
कार्यक्रममा रोजा राईले गीत प्रस्तुत गरेका थिए। अध्यक्षको रूपमा बोल्दै दिपक प्रधानले छुवाछुत र कठोर हिन्दुत्वको समयमा गङ्गाप्रसादले कठोर मेहनत गरेर गोर्खाहरूको हितमा काम गरेकोजो चिर स्मरणीय रहेको बताए।
उनले 32 वर्षसम्म गोर्खे खबर कागत् चल्नु ठूलो उपलब्धि रहेको बताउँदै नेपाली भाषामा बाइबल पाउनु मुख्य कुरा रहेको बताए। ‘पाद्रीलाई हामीले चिन्नुपर्छ, उनलाई हामीले धर्मको मानसिकताले हेर्नु हुँदैन। उनी गोर्खाहरूको दिशा निर्देशक हुन्,’ उनले भने। कार्यक्रममा धन्यवाद शिक्षिका चित्रकला गुरूङले राखिन्।